Filinka galmada muxuu kugu sameeyaa hadaa badsato | Gaaloos.com
Home » galmada » Filinka galmada muxuu kugu sameeyaa hadaa badsato
Filinka galmada muxuu kugu sameeyaa hadaa badsato
Filimada galmada oo laga soo daayo internetka ama disha raga iyo dumarkaba waxay ku ridaan kacsi la’aan, siigada waa in aad waa aad xubintaada taranka ah shaqo galisaa ayadoo xiligaasi aan wax dumar ah kula joogin adigoo sawiranaya ama maskaxda galinaya in aad la baashaaleysid qofka aad jeceshahay ama aad keheshay.
Ragga ayaa ku kala badan siigada wallow ay qaarkood ku andocoonayaan in ay ku qasabta xaalada ay ku sugan yihiin ee doobnimada, lkn waxaa la wadaaga ragg kale oo aan doob ahayn ayaguna oo sidaa sameeya. iyagoo sheegay in ay mararka ay xasuustaan halka qaar kale ay leeyihiin waxa ay ka macdahay marka aan la falgalaayo lamaanteyda.
Dhalin yarada qaar ayaa waxa ay qaati ka taaganyihiin joogtada ay u sameeyaan Falka siigada ah, waxaan ku adag sidii ay isaga reebi leekeyahaayeen.
Hadaba dhalintaasi qaarkood ayaa waxa ay u sheegeen in ay adagtahay sida laysaga gooyn lahaa falka riyada soojeedka ah ku dhisan.
Mid kamid ah dhlinta aan la kulanaya ayaa waxa uu inooga waramay in uusan moogaan karin hal maalin xitaa “aniga waxaan qaati ka taaganahay siigada waayo mar walbo oo ani kaligey ahay waxaan igu soo dheceeyso in aan sameeyo,” sidaasi waxaa yiri Mr Aa.
“Waxaab ii sii dheer daawashada filimada xun ku waasi oo sabab u ah cadadaan foosha xun, taasi oo sababta weyn ah ee igu qasabta siigada” ayuu sii raaciyay Mr Aa.
Title: Filinka galmada muxuu kugu sameeyaa hadaa badsato